Inona no atao hoe Maat? - Foundation Afrikhepri
Qsatroka no soatoavina iorenan'ny Maat? Inona no tadiaviny amintsika? Inona no antenainy amintsika? Mba hahazoana hevitra, ny fomba mora indrindra dia ny fandinihana haingana ny fomba fanasokajian'ny Maat ny zavaboary arakaraka ny ambaratongam-pahefana fehezin'ny fahafahan'ny tsirairay amin'izy ireo hiditra amin'ny fisiana voafehy kokoa, amin'ny fanehoana ny kalitao. ary fahaiza-manao ambonimbony kokoa, ary noho izany ny fanajana ny fiainana ara-panahy kokoa.
Amin'ny ambaratonga ambany indrindra amin'ity ambaratongam-pahefana ity dia ireo mpampijaly. Ireo olona ireo dia miaina amin'ny famelana ny filan'izy ireo voalohany haneho hevitra an-kalalahana: herisetra, fijejojejoana, lainga, fetsy sns Izy ireo dia mitarika fiainana ara-bakiteny sy taloha. Ny fiarahamonina dia mihevitra azy ireo ho marginal, satria tsy manaiky ny teritery mifehy ny fitondran-tenany izy ireo hahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny fiainana ara-tsosialy. Amin'ity ambaratonga ity, ny lalàn'ny antony sy ny vokany izay mifehy ny hoavin'ny zavaboary dia mihatra amin'ny mekanika. Ireo izay iharan'ity lalàna ity dia hanana fahatsapana ny fiainana eto an-tany, toy ny ao amin'ny trano fanitsiana.
Etsy ambonin'ny brutes dia manavaka ny olon-tsotra ny Ma'at. Izany no tranga ho an'ny ankamaroan'ny olona izay mifanerasera amintsika isan'andro. Mihetsika izy ireo araka ny kaody fehezin'ny fiaraha-monina. Izany dia mahatonga azy ireo ho mpiasa sosialy tafiditra ao anaty rafitra ara-tsosialy manokana, mankatoa ny lalàna sy ny fifanarahana voafaritra ara-tsosialy. Saingy ireo fifanarahana sy lalàna ireo dia tsy voatery hifanaraka amin'ny etika Ma'at. Izany no mahatonga ireto lehilahy sy vehivavy mino fa manana fiainana hajaina ireto, nefa raha ny tena izy dia eo ambany fitaoman'olombelona tery tery dia hijaly amin'ny sazy mitovy amin'ilay taloha.
Ambonin'ny lehilahy tsotra, ny Ma'at dia mametraka lehilahy manan-talenta. Ireo zavaboary ireo dia miavaka amin'ny toetra iray na vitsivitsy miavaka, izay ahafahan'izy ireo manavaka ny tenany amin'ny vahoaka, amin'ny ankapobeny amin'ny fanaovana kanto na asa iray. Miavaka tokoa ny teknikan'izy ireo, izay mahasarika ny besinimaro amin'ny ankapobeny, ary manintona endrika fiankohofana ho azy ireo. Saingy ny talenta amin'ny ankapobeny dia tsy manan-kery amin'ny toetra mampiavaka ny olombelona. Mifanohitra amin'izany no izy, ny lehilahy sy vehivavy manan-talenta matetika dia feno fireharehana, mirehareha ary tia tena, manao ny fiainana ny manodidina azy ho manandanja.
Lehilahy manan-talenta ambonimbony kokoa, ny Maât, no mahatonga antsika hahita lehilahy manan-talenta. Mampiavaka azy ireo ny fahaizana sy kalitao tena manokana. Satria afaka misambotra fahalalana izy ireo, ary fahalalana izay tsy azon'ny olon-tsotra idirana. Ary, rehefa vita izany, ny genius dia mahavita amin'ny sehatry ny asan'ny olombelona rehetra, manova na miteraka fitomboan'ny tantara. Fa eto indray, ny genius dia tsy miaro ilay manana azy amin'ny toetran'ny olombelona, ​​izay fantatsika tsara ny momba azy.
Ambonin'ny fanahy mahery, ny Maat, dia mahatonga antsika hahita ireo Olomasina. Ny Olomasina dia olona iray, rehefa notsidihin'ny natioran'Andriamanitra, dia nanapa-kevitra ny hanokana azy tanteraka ny fiainany, indraindray tsy mandeha irery. Ka noho izany dia tonga izy hanapaka ny tenany tsy ho eo amin'izao tontolo izao. Ka noho izany, ny Olomasina na dia eo amin'ny fivoarana ara-panahy avo lenta aza dia mbola tsy, tamin'ny fomba fijerin'ny siansa fanombohana: ny Maat, nahavita io dingan'ny fampandrosoana ara-panahy io.
Miaraka amin'ny Initiates, na Mpanompo an'i Ma'at, (Sem-shou-Ma'at) no nahavitana ity dingana ity. Fa samy manana Fahendrena, Fitiavana tsy miankina ary hery. Izy ireo dia miasa mitovy tanteraka amin'ny Masoandro, izay ny fotokevitra mavitrika dia ny tsy fahalianana, toetra iray mampiavaka ny maha-Andriamanitra. Tsy ilaina intsony ny milaza fa mahalana ireo zavaboary ireo eto ambonin'ny tany. Rehefa miseho amin'ny vondrom-piarahamonina iray ny iray amin'izy ireo dia miova ara-bakiteny izy io, novaina ny anjarany. Ny fandraisana andraikitra dia tsy maintsy raisina ho mpiasam-panjakana amin'ny fitantanan'Andriamanitra nalefa teto an-tany mba hanatanteraka asa manokana.
Na eo aza izany, eo ambonin'ny Initiates dia sokajy farany: ny Masters of Initiation, na (NEB-Maât). Ireo dia tsy miavaka amin'ny Initiates, afa-tsy ny fanekena an-tsitrapo hiverina any an-tany hanampiana ny olombelona hivoatra amin'ny lalan'ny fivoarana ara-panahy. Ireo zava-boahary tsy manam-paharoa ireo, na inona na inona faritra misy azy ireo eto an-tany ary miharihary, na inona na inona foko nanapa-kevitra ny hateraka indray, dia manana fahatsiarovan-tena mitovy, fahalalana mitovy amin'Andriamanitra, fangorahana mitovy ho an'ny rehetra. ny zavaboary. Na eo aza ny ady dia voatery mandoa vola izy ireo indraindray mba hametrahana ny fahitany. Na eo aza ny hamafin'izy ireo amin'ny fitsaboana olona tsy azo sitranina.
Ny Masters rehetra amin'ny fanombohana izao rehetra izao dia tsy manana afa-tsy fahalalana tokana: Ma'at, izay siansa masina ihany. Izany no antony, amin'ny ambaratonga avo indrindra amin'ity siansa ity, raha tafaraikitra ny axioms sy ny postulateur fototra, dia mihoampampana koa ny fampianaran'ny Grand Masters. Ny fampiharana izay misy ifandraisany amin'ny psikolojian'ny vondrona, amin'ny toe-javatra ara-tantara, indrindra ny olona toa izany na izany dia afaka mitaky fihenan-tsofina.
Noho io firaisan-kinan'ny fahalalana masina io, ny tanjona faratampon'ny Ma'at dia ny hampahafantatra ny olombelona fa na eo aza ny fahasamihafana misy ankehitriny dia voaheloka izy ireo hanangana sivilizasiôna, izay ho lasa tena firahalahiana. Ity imperative ity dia voasoratra ao amin'izy ireo toy ny kaody génétique. Nasehoko tao amin'ny Volume I of theory of the African Revolution, fa amin'ny fampandrosoana, ny fiarahamonina afrikanina, ohatra, dia mirona amin'ny fanatanterahana ity maodelin'ny fiarahamonina ity, izay nantsoiko hoe: "The Maatocratic Society". Ao anatin'ity fiaraha-monina ity, noho ny fampiharana ny Maat, ny toetra ambony ananan'ny zanak'olombelona, ​​dia tsy hivoatra sy hiroborobo ihany, fa koa hanana tena fototry ny fahazarana. Ity toby ity dia matanjaka ampy ahafahana mandray sy mandevona ny fiarahamonina neoliberal ankehitriny, izay mahatonga ny lehilahy tsotra ho fitsipika fotsiny, isan-jaton'ny brute mendri-kaja, lehilahy manan-talenta vitsivitsy ary indraindray manam-pahaizana vitsivitsy. Izay tsy ampy amin'ny kalitao hamerenana ny lojika anatiny.
Satria ao amin'ity fiarahamonina ity, ny hevitra momba ny fahasambarana aorina manodidina ny fananana entana, ny fanjifana tsy misy fetra ary ny tsy fahitan-karena, noho izany dia tafiditra amin'ny hantsana ara-tsosialy iray izay mitarika azy tsy ho faty amin'ny fanjavonan'ny loharanon-karena manokana. ara-pitondrantena. Ny etika dia tsy haneho afa-tsy ny volondavenona amin'ny andavanandrom-piainany, izay na eo aza ny fisehoana dia hita taratra fotsiny ny fahagolan-tany teo amin'ny fiarahamonina olombelona.
“Tsy misy fahamarinana lehibe noho i Ma'at. Ma'at irery no hany fahamarinana ”
Nosoratan'i Jean-Pierre Kaya
2 vaovao avy amin'ny € 27,95
1 ampiasaina amin'ny € 67,99
Vidio € 27,95
Nohavaozina farany tamin'ny 10 aprily 2021 11:10 maraina
Jereo ny vaovao nasionaly sy iraisam-pirenena mivantana!
Ny tohodrano Renaissance, toeram-piantsonan'ny herinaratra herinaratra lehibe indrindra any Afrika
Ny fitsipiky ny 12 momba ny fahazoan-dàlana hifikitra amin'ny natiora
Hijery afisy afrikanina HD (vidéo)